एक राम्रो इसाई के हो, वर्ल्डवाइड चर्च अफ गॉड स्विजरल्याण्ड (WKG)
के ख्रीष्ट लेखिएको ठाउँमा हुनुहुन्छ?
मैले वर्षौंदेखि सुँगुरको मासु खानु परेको छ। मैले सुपरमार्केटमा "भाँडाको सासेज" किनें। कसैले मलाई भने: "त्यहाँ यस भाडाको सुसेजमा पोर्क छ!" म यसलाई सायद विश्वास गर्न सक्दिन। सानो प्रिन्टमा, यद्यपि यो सेतोमा कालो थियो। "नगदी बक्स दुर्घटना" (एक स्विस टिभी कार्यक्रम) भेल सॉसेजको परीक्षण गर्‍यो र लेख्छन्: वेल सॉसेज बार्बेक्युजमा धेरै लोकप्रिय छन्। तर हरेक सासेज जस्तो कि भाभी सॉसेज जस्तो देखिदैन। यसले प्राय: डाँडा भन्दा सुँगुरको मासु समावेश गर्दछ। स्वादमा पनि भिन्नताहरू छन्। विज्ञहरूको एउटा निर्णायकले “कासेन्स्टुरज” को लागी सब भन्दा बेच्ने भील सासेजको परीक्षण गर्‍यो। सबै भन्दा राम्रो वेल सासेज केवल% 57% भेल समावेश गर्दछ र विशेष गरी स्वादिष्टको रूपमा मूल्या .्कन गरिएको थियो। आज हामी "क्रिश्चियन" लेबललाई नियालेर हेर्दछौं र आफैलाई सोध्छौं: "के ख्रीष्ट त्यहाँ हुनुहुन्छ जहाँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ?"
के तपाईं एक जना इसाईलाई चिन्नुहुन्छ जो एक असल इसाई हुनुहुन्छ? म केवल एक जनालाई चिन्छु जसको बारेमा म पूरै भन्न सक्छु कि ऊ एक असल इसाई हो। येशू ख्रीष्ट आफैं! अरुहरू इसाईहरू हुन् जसरी ख्रीष्टले उनीहरूमा बास गर्न अनुमति दिनुहुन्छ। तपाईं कस्तो प्रकारको ईसाई हुनुहुन्छ? १००% ईसाई? वा के तपाईं आफैंमा सामिल हुनुहुन्छ र त्यसकारण चिह्न सहित केवल लेबल होल्डर हुन्: "म एक क्रिश्चियन हुँ"! के तपाई धेरै हिंड्ने हो?
यस दुविधाबाट बाहिर एक तरिका छ! तपाईं र म पश्चाताप, पश्चात्ताप, अर्को शब्दहरूमा, येशूलाई पश्चात्ताप मार्फत १००% इसाई बन्छौं! त्यो हाम्रो लक्ष्य हो।
पहिलो बुँदामा हामी "पश्चाताप" मा हेर्दछौं
येशूले आफ्नो भेडाहरूको गोठमा ठीक तरिका भन्नुभयो (उसको राज्यमा) ढोकाबाट नेतृत्व गर्नुहोस्। येशू आफैले भन्नुभएको छः म ढोका हुँ! कोहीहरु परमेश्वरको राज्यमा पस्न भित्तामा चढ्न चाहान्छन्। त्यो सम्भव छैन। मुक्ति पाउन को लागी कि परमेश्वर हाम्रो लागि मानिसहरु लाई समावेश छ पश्चाताप र विश्वास प्रभु येशू ख्रीष्टलाई। त्यो एकमात्र तरीका हो। कुनै पनि हिसाबले उसको राज्यमा चढ्न खोज्ने व्यक्तिलाई भगवानले स्वीकार गर्न सक्नुहुन्न। बप्तिस्मा दिने जोनले बसहरू प्रचार गरे। इस्रायलका जनताले येशूलाई तिनीहरूका उद्धारकको रूपमा स्वीकार्नुपर्दछ। त्यो तपाईं र मलाई आज लागू हुन्छ!
"तर यूहन्नालाई झ्यालखानामा हालेपछि येशू गालीलमा आउनुभयो र परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो र भन्नुभयो: समय आइसकेको छ र परमेश्वरको राज्य आइसकेको छ। पश्चात्ताप गर्नुहोस् र सुसमाचारमा विश्वास गर्नुहोस् » (मार्क १,१-1,14-१-15)!
परमेश्वरको वचन यहाँ स्पष्ट छ। पश्‍चात्ताप र विश्वासको सम्बन्ध जोडिएको छ। यदि मैले पछुताएको छैन भने, तब मेरो सम्पूर्ण जग अस्थिर छ।
हामी सबैलाई सड़क यातायात को कानून थाहा छ। केही वर्ष पहिले म कारबाट मिलन गएका थिए। म हतारमा थिएँ र शहरमा २ km किमी एक घण्टा पनि द्रुत गतिमा ड्राइभ गरें। म भाग्यमानी थिए। मेरो ड्राइभर इजाजतपत्र खारेज गरिएको थिएन। पुलिसले मलाई जबरजस्ती जरिवाना र न्यायाधीशको चेतावनी दियो। सडकमा बसहरू गर्नु भनेको रकम तिर्नु र नियमहरू पालना गर्नु हो।
आदम र हवाको माध्यमबाट संसारमा पाप आएको समयदेखि नै मानिसहरू पापको जुवामुनि बसेका छन्। पापको सजाय अनन्त मृत्यु हो! सबैले आफ्नो जीवनको अन्तमा यो जरिवाना तिर्दछन्। "पश्चाताप" भनेको जीवनमा यू-टर्न बनाउनु हो। आफ्नो अहंकार सम्बन्धित जीवनको पश्चात्ताप र भगवान मा फर्कनुहोस्।
बसहरू गर्नुको मतलब: «मैले आफ्नै पापीपनलाई चिन्छु र यसलाई स्वीकार गर्छु! «म एक पापी हुँ र अनन्त मृत्युको योग्य छु! »मेरो स्वार्थी जीवनशैलीले मलाई मृत्युको स्थितिमा पुर्‍याउँछ।
"तपाईं पनि आफ्नो अपराध र पापले मर्नुभएको थियो, जसमा तपाईं यस संसारको प्रकृति अनुसार हावामा रहेको शक्तिशालीको अधीनमा बस्नुहुन्थ्यो, अर्थात् आत्माको आज्ञा पालन नगर्ने बच्चाहरूमा काम गरिरहनुभएको थियो। ती मध्ये हामी सबै एक पटक आफ्नो शरीरको अभिलाषामा आफ्नो जीवन बितायौं, शरीर र इन्द्रियको इच्छा गर्यौं र प्रकृति र साथ साथै अरूसँग क्रोधको सन्तान थियौं। (एफिसी २: १-2,1-१-3)
म मेरा अपराधहरू र पापहरूको कारणले गर्दा मरेको छु र म आफैं आध्यात्मिक तवरमा सिद्ध हुन असमर्थ छु। एक मरेको व्यक्तिको रूपमा, ममा जीवन छैन र म आफैले केही गर्न सक्दिन। मृत्युको अवस्थामा म पूर्ण रूपमा मेरो मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको सहयोगमा निर्भर छु। केवल येशू मरेकाहरूलाई बिउँताउन सक्नुहुन्छ।
के तपाईंलाई निम्न कथा थाहा छ? जब लाजरस बिरामी छन् भन्ने सुने, येशूले बेथानीमा लाजरस जानु अघि दुई दिन पर्खनुभयो। येशू कुन कुराको लागि पर्खिरहनुभएको थियो? लाजरस आफैले आफै केही गर्न सकेनन्। ऊ आफ्नो मृत्युको पुष्टिको लागि पर्खिरहेको थियो। म कल्पना गर्दछु जब येशू आफ्नो चिहानमा उभिनुभयो तब कस्तो महसुस भयो। येशूले भन्नुभयो, “ढु the्गा हटाऊ!” मृतककी बहिनी मार्टाले जवाफ दिइन्: "ऊ सुगन्धित छ, ऊ मरेको days दिन भइसक्यो"!
एक अन्तरिम प्रश्न:
तपाईंको जीवनमा केहि यस्तो छ कि दुर्गन्धित छ कि तपाईं येशू "ढु stone्गा पल्टाइदिनुभयो" भन्ने चाहनुहुन्न? ईतिहासमा फर्कनुहोस्।
तिनीहरूले ढु the्गा हटाई र येशू प्रार्थना गर्नुभयो र ठूलो स्वरमा कराए, "लाजरस, बाहिर निस्की आऊ!" मृतक बाहिर आए।
समय पूरा भएको छ, येशूको आवाज पनि तपाईंमा जान्छ। परमेश्वरको राज्य तपाईंको नजिक आएको छ। येशू ठूलो स्वरमा कराउनुहुन्छ: "बाहिर आऊ!" प्रश्न यो हो कि तपाईं कसरी आफ्नो स्वार्थी, स्वार्थी, दुर्गन्धित सोच्ने र अभिनयबाट बाहिर निस्कनुहुन्छ? तपाईंलाई के चाहिन्छ तपाईंलाई ढु roll्गा हटाउन कसैलाई आवश्यक छ। तपाईंलाई कफन हटाउन कसैको सहयोग चाहिन्छ। तपाइँलाई सोच्ने र अभिनय गर्ने पुरानो दुर्गन्धित तरिकाहरू गाड्न मद्दतको लागि कोही चाहिन्छ।
अब हामी अर्को बुँदामा आउँछौं: old पुरानो व्यक्ति »
मेरो जीवनमा सबैभन्दा ठूलो अवरोध मेरो पापी स्वभाव थियो। यस सन्दर्भमा, बाइबलले "वृद्ध व्यक्ति" को कुरा गरेको छ। परमेश्वर र ख्रीष्टबिना मेरो अवस्था यही थियो। परमेश्वरको इच्छाको विरोधाभास गर्ने सबै कुरा मेरो पुरानो व्यक्तिको हो: मेरो व्यभिचार, मेरो अशुद्धता, मेरो शर्मिलापना, मेरो खराब इच्छा, मेरो लोभ, मेरो मूर्तिपूजा, मेरो क्रोध, मेरो क्रोध, मेरो कुकर्म, मेरो ईश्वरनिन्दा, मेरो शर्मनाक शब्दहरू, मेरो अभिभूत र मेरो धोखाधडी। पावलले मेरो समस्याको समाधान देखाउँदछ:
«हामीलाई थाहा छ हाम्रो बुढो मानिस उहाँसँगै क्रूसमा टाँगिएको थियो ताकि पापको शरीरलाई नष्ट गरियोस् र हामी पापको दास हुने थिएनौं। किनकि जो मर्दछ, ऊ पापबाट स्वतन्त्र भएको छ » (रोमी .6,6.२7-२XNUMX)
मेरो लागि येशूसँग घनिष्ठ सम्बन्धमा बस्नको लागि, वृद्ध व्यक्ति मर्नै पर्छ। मैले बप्तिस्मा गरेको बेलामा मलाई त्यस्तै भयो। येशू क्रूसमा मर्नुभयो जब येशूले मात्र मेरो पाप मा लिनुभयो। उसले मेरो "बुढो मानिस" लाई पनि यो क्रसमा मर्न दियो।
«वा के तपाईंलाई थाहा छैन हामी सबैले येशू ख्रीष्टमा बप्तिस्मा गरेका उनको मृत्युमा बप्तिस्मा लियौं? यसैले हामी पनि उहाँसँगै बप्तिस्माद्वारा मृत्युमा गाडियोौं, ताकि पिताले आफैले ख्रीष्टको पुनरुत्थानद्वारा मृत्युबाट बिउँताए जस्तो हामी पनि नयाँ जीवनमा हिंड्न सक्छौं। (रोमी .6,3.२4-२XNUMX)
मार्टिन लुथर यस वृद्ध मानिस "बुढा एडम" भन्छन्। उसलाई थाहा थियो कि यस बुढो व्यक्तिले "पौडन" सक्छ। म सधैं «वृद्ध व्यक्ति live बाँच्न अधिकार दिन्छु। म यो मेरो खुट्टा मैला गर्न प्रयोग गर्दछु। तर येशू ती धुनेलाई बारम्बार तयार हुनुहुन्छ! परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट, म येशूको रगतले धोइएको थियो।
हामी अर्को बुँदा "कानून" लाई विचार गर्दछौं
पावलले विवाहसँगको सम्बन्धलाई व्यवस्थासँग दाँजेर तुलना गरे। मैले सुरुमा येशूको सट्टा लेवी कानूनसँग विवाह गर्न गल्ती गरेको छु। मैले यो व्यवस्था पालन गरेर आफैंमा पापमाथि विजय हासिल गर्ने प्रयास गरें। कानून एक राम्रो, नैतिक ईमानदार पार्टनर हो। यसैले म येशू संग व्यवस्था भ्रमित। मेरो पति / पत्नी, कानूनले मलाई कहिले पिटेन वा चोट पुर्याएन। मलाई उसको कुनै पनि मागमा कुनै गल्ती भेटिएन। कानून मात्र र राम्रो छ! जे होस्, कानून एक धेरै मांग "पति" हो। ऊ मबाट प्रत्येक क्षेत्रमा पूर्णता अपेक्षा गर्दछ। उसले मलाई घर सफा राख्नु भन्यो। पुस्तकहरू, लुगा र जुत्ता सबै ठीक ठाउँमा हुनुपर्दछ। खाना समय र सिद्ध मा तयार हुनुपर्छ। एकै साथ कानुनले मेरो काममा मद्दत गर्न औँला उठाउँदैन। उसले मलाई भान्छामा वा अरू कतै सहायता गरिरहेको छैन। म कानूनको साथ यो सम्बन्ध समाप्त गर्न चाहान्छु किनकि यो एक प्रेम सम्बन्ध होईन। तर त्यो सम्भव छैन।
“जबसम्म पुरूष बाँचुन्जेल एउटी आइमाई आफ्ना लोग्नेको अधीनमा बस्छ। तर यदि पुरुष मरे भने उनी कानूनबाट मुक्त हुन्छिन्। तर यदि उसको लोग्ने चाँहि जीवित छेन् पनि उसलाई व्यभिचारिणी भनिन्छ। तर यदि उसको लोग्ने चाँहि मर्यो भने उ विवाहको विधानबाट स्वतन्त्र हुन्छे। यसैले मेरा दाज्यू-भाइहरू र दिदी-बहिनीहरू, ख्रीष्टको शरीर मार्फत व्यवस्थाद्वारा मारिए। यसैले हामी एक अर्काको हौं जुन मृत्युबाट उठाइएको हो, ताकि हामी परमेश्वरको साथ फल फलाउन सकौं। (रोमी .7,2.२4-२XNUMX)
उहाँ क्रूसमा मर्नुहुँदा मलाई "ख्रीष्ट" खडा गरियो र म उहाँसँगै मरेँ। त्यसकारण कानूनले मलाई आफ्नो कानूनी अधिकार गुमाउँछ। येशूले व्यवस्था पूरा गर्नुभयो। म शुरुदेखि नै परमेश्वरको दिमागमा छु र उहाँले मलाई मद्दत गर्न उहाँ मलाई ख्रीष्टसित एकतामा बाँध्नुभयो। म आफैले निम्न टिप्पणीहरुलाई अनुमति दिन्छु: जब येशू क्रूसमा मर्नुभयो, के तपाईं पनि उहाँसंगै मर्नुभयो? हामी सबै उहाँसंगै मरे, तर यो कथाको अन्त्य होइन। आज येशू हामी प्रत्येकमा बस्न चाहनुहुन्छ।
"किनकि म व्यवस्थामा बाँच्नको निम्ति कानून पालन गर्न मरे। म ख्रीष्टसँगै क्रूसमा टाँगिएको छ। म जीवित छु, तर अब म होइन तर ख्रीष्ट मभित्र बास गर्नुहुन्छ। किनकि अब म जुन शरीरमा बाँचिरहेछु, म परमेश्वरको छोरामाथि विश्वास गर्छु, जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र मेरो निम्ति आफैलाई अर्पण गर्नुभयो। (गलाती 2,19: -20-।)
येशूले यसो भन्नुभयो: he अरू कसैलाई पनि ऊ भन्दा ठूलो प्रेम हुँदैन किनकि उसले आफ्नो जीवन आफ्नो साथीहरूको लागि दिन्छ (यूहन्ना १:15,13:१) »। मलाई थाहा छ यी शब्दहरू येशू ख्रीष्टमा लागू हुन्छन्। उसले तपाईं र मेरो लागि आफ्नो जीवन बलिदान गरे! जब म येशूको लागि आफ्नो जीवन दिन्छु, यो म उहाँलाई व्यक्त गर्न सक्ने सबैभन्दा ठूलो प्रेम हो। येशूलाई मेरो जीवन बिना शर्त दिएर, म ख्रीष्टको बलिदानमा भाग लिन्छु।
दाज्यू-भाइहरू र दिदी-बहिनीहरू, अब म तिमीहरूलाई भन्छु, परमेश्वरको अनुग्रहले आफ्ना शरीरहरूलाई बलिदानको रूपमा दिन इच्छुक हुनु, एक पवित्र र जीवित परमेश्वरलाई ग्रहण गर्नु हो। यो तपाईको समझदार उपासना सेवा हो » (रोमी :12,1:११)।
वास्तविक बसहरू गर्नुको मतलब:
म जानाजानी बुढोको मृत्युको लागि हो भन्छु।
म येशूको मृत्युको माध्यमबाट व्यवस्थाबाट मुक्ति पाउनको लागि हो भन्छु।
विश्वास गर्नुको अर्थ:
म ख्रीष्टमा नयाँ जीवनको लागि हो भन्छु।
«तसर्थ: यदि कोही ख्रीष्टमा छ भने ऊ नयाँ सृष्टि हो; पुरानो बितेको छ, हेर्नुहोस्, नयाँ भएको छ » (२ कोरिन्थी १ 2:१:5,17)।
महत्त्वपूर्ण कुरा: “येशू ख्रीष्टमा नयाँ जीवन”
हामी गलातीहरूलाई लेखेको पत्रमा पढ्छौं: Live म जीवित छु, तर अब म होइन तर ख्रीष्ट मभित्र बास गर्नुहुन्छ। , ख्रीष्टमा तपाईंको नयाँ जीवन कस्तो छ? येशूले देख्नको लागि कुन स्तर प्रयोग गर्नुभयो? उसले तपाईको घरलाई अनुमति दिन्छ (तपाईंको मुटु) फोहोर र फोहोर राख्न? No! येशू व्यवस्थाको माग भन्दा धेरै माग गर्नुहुन्छ! येशू भन्नुहुन्छ:
"तपाईंले सुन्नुभयो कि यसले यसो भनेको थियो:" तिमीले व्यभिचार गर्नु हुँदैन। "तर म तपाइँलाई भन्छु: जसले महिलालाई खोज्न खोज्छ उसले उसको हृदयमा व्यभिचार गरिसकेको छ"। (मत्ती १०: १ -5,27 -२०)
येशू र व्यवस्थाको बिचमा के भिन्नता छ? कानुन धेरै आवश्यक छ, तर तपाईंलाई कुनै सहयोग र प्रेम दिएन। येशूको माग व्यवस्थाको माग भन्दा धेरै छ। तर उसले तपाईंलाई तपाईंको अर्डरमा मद्दत गर्दछ। उनी भन्छन्: "हामी सबै मिलेर गर्छौं। सँगै घर सफा गर्नुहोस्, लुगा र जुत्ता सही ठाउँमा सँगै राख्नुहोस् » येशू आफ्नो लागि बाँच्नुहुन्न, तर तपाईंको जीवनमा भाग लिनुहुन्छ। यसको मतलव तपाईले अब आफ्नै लागि बाँच्नु हुँदैन, तर उसको जीवनमा भाग लिनु पर्छ। तपाईं येशूको काममा भाग लिनुहुन्छ।
"यसैले ऊ त्यहाँ बस्ने सबैको लागि मर्‍यो अब उप्रान्त आफैं बाँच्नु हुँदैन तर जो मर्नुभयो र तिनीहरूका लागि गुलाब हुनुभयो » (२ कोरिन्थी १ 2:१:5,15)।
एक इसाई हुनु भनेको येशूसँग धेरै घनिष्ठ सम्बन्धमा बाँच्नु हो। येशू तपाईंको जीवनको सबै अवस्थाहरूमा सामेल हुन चाहनुहुन्छ! वास्तविक विश्वास, साँचो आशा र प्रेम आफैंमा हिममा छन्। यसको जग ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हो, येशूले तपाईंलाई माया गर्नुहुन्छ! म तपाईंलाई सोध्छु: तपाईंको लागि व्यक्तिगत रूपमा येशू को हुनुहुन्छ?
येशू तपाईंको हृदय भर्नुहुन्छ र तपाईंको केन्द्र बन्न चाहनुहुन्छ! तपाईं आफ्नो जीवन येशूमा पूर्ण रूपमा दिन सक्नुहुन्छ र उहाँमा निर्भर रहनुहुन्छ। तपाईं कहिले निराश हुनुहुने छैन। येशू प्रेम हुनुहुन्छ। उसले ती तपाईंलाई दिन्छ र तपाईंको भलो चाहन्छ।
"तर हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र ज्ञानमा बढ्नुहोस्" (१ पत्रुस १: २)
म अनुग्रह र ज्ञान मा बुझेर बुझ्छु "म येशू ख्रीष्टमा को हुँ"! यसले मेरो ब्यबहार, मेरो दृष्टिकोण र मैले गर्ने सबै परिवर्तन गर्दछ। त्यो सत्य बुद्धि र ज्ञान हो। सबै अनुग्रह हो, एक अपरिचित उपहार! यो awareness क्रिष्ट इन यूएस »को जागरूकतामा झन् झन् बढ्दै जान्छ। परिपक्वता यस "क्रिष्टमा हुनु" मा पूर्ण सद्भावमा बस्नु हो।
हामी निष्कर्षमा पुग्छौं faith विश्वासको सम्बन्धमा पश्चात्ताप »
हामी पढ्छौं pen तपस्या गर्नुहोस् र सुसमाचारमा विश्वास गर्नुहोस्। यही नै ख्रीष्ट र परमेश्वरको राज्यमा हाम्रो नयाँ जीवनको सुरूवात हो। तपाईं र म ख्रीष्टमा जीवित छौं। त्यो राम्रो समाचार हो। यो विश्वास दुवै प्रोत्साहन र चुनौती हो। ऊ वास्तविक आनन्द हो! यो विश्वास जीवित छ।
यस संसारको निराशा हेर्नुहोस्। मृत्यु, प्रकोप र दुख उनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गर्दछन्: "परमेश्वरले खराबीलाई भलाइले जित्नुहुन्छ"।
तपाईं आफ्नो सँगी मानवको आवश्यकता र सरोकारको अनुभव गर्नुहुन्छ, सचेत हुनुहुन्छ कि तपाईंसँग तिनीहरूको लागि कुनै समाधान छैन। के तपाईं तिनीहरूलाई प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ उनीहरूसँग येशूसँग घनिष्ठ र घनिष्ठ सम्बन्धमा छ। उसले एक्लै सफलता, आनन्द र शान्ति ल्याउँछ। उसले एक्लै पश्चात्तापको आश्चर्यकर्म गर्न सक्छ!
तिनीहरूले दिनहुँ परमेश्वरको हातमा हाल्छन्। जे भए पनि, तपाई उसको हातमा सुरक्षित हुनुहुन्छ। उहाँसँग प्रत्येक परिस्थिति नियन्त्रणमा छ र सही निर्णयहरूको लागि तपाईंलाई बुद्धि दिनुहुन्छ »
तिनीहरू कुनै कारण बिना, साना, अभियोगी र अभियोगी बनाइन्छ। तर तपाईंको विश्वासले भन्छ: "म येशू ख्रीष्टमा छु"। उसले सबै कुरा देखेको छ र मेरो जीवन कस्तो महसुस गर्छ भनेर जान्दछ। तपाईं उहाँमा पूर्ण भरोसा गर्नुहुन्छ।
पावलले यसलाई हिब्रूमा लेखेको विश्वासको अध्यायमा राखेका थिए:
"विश्वास भनेको तपाईले के आशा गर्नुहुन्छ भन्नेमा दृढ विश्वास हो र तपाईले नदेखाएको कुरामा निर्विवाद विश्वास हो" (हिब्रू ११: १)!
येशूसँगको दैनिक जीवनमा त्यो साँच्चिकै चुनौती हो। तपाईं उसलाई आफ्नो पूरा भरोसा दिनुहोस्।
निम्न तथ्यहरूले मेरो लागि गणना गर्दछ:
येशू ख्रीष्ट ममा १००% बास गर्नुहुन्छ। यसले मेरो जीवनलाई बचाउछ र पूरा गर्दछ।
म येशूमा पूर्ण भरोसा गर्दछु। मलाई आशा छ तपाईं पनि!
पाब्लो Nauer द्वारा